नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : बेमौसमी बर्षाले नेपालमा धनजनको ठुलो क्षति, धानबाली पनि ठुलो असर, कहाँ कहाँ के के भयो हेर्नुस विवरण !
बेमौसमी बर्षाले नेपालमा धनजनको ठुलो क्षति, धानबाली पनि ठुलो असर, कहाँ कहाँ के के भयो हेर्नुस विवरण !
बेमौसमी बर्षाले नेपालमा धनजनको ठुलो क्षति भएको मात्रै छैन स्याहार्न लागेको धानबालीलाई पनि ठुलो असर परेको छ । धानबालीमा परेको असर ले किसानहरुको हरिबिजोक हुने सम्भावना पनि देखिएको छ । मनसुनी बर्षा सकिएपछि पनि केही दिनयता आएको निरन्तर वर्षका कारण बाढी, डुबान तथा प्राकृतिक विपद्बाट क्षति भोग्नुपरेको अवस्था छ । बंगालको खाडीमा बनेको न्यून चापीय क्षेत्र र पश्चिमबाट आएको पश्चिमी वायुुको प्रणालीको संयुक्त प्रभाव नेपालमा परेका कारण अहिले वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । यसमा पनि पश्चिमी वायुको प्रभाव बढी भएका कारण देशको सुदूरपश्चिममा २४ घण्टामा दुई सय एम.एल. भन्दा बढी अर्थात् अतिवादी वर्षा भएको विभागका मौसमविद् समिर श्रेष्ठले बताउनुभयो । यो वर्षा एकैचोटी कम नहुने तर भोलि बुधबार अलि कम वर्षा हुने र पर्सि बिहीबार मात्रै मौसममा राम्रोसँग सुधार आउने उहाँले बताउनुभएको छ ।
सोमबार विहानैदेखि अस्वभाविक रुपमा देशैभर मनसुन सक्रिय हुँदा परेको पानीका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । एक साता अघिनै मौसम पूर्वनुमान महाशाखाले सूचना जारी गरेपनि किसानले सूचना प्रति चनाखो नहुँदा क्षति वेहुर्नु परेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका पूर्व महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले बताउनुभयो ।
यसै बिच सोमबार रातिबाट महाकालीको बीचमा फसेकाहरुको आज मंगलबार सकुशल उद्धार गरिएको छ । महाकाली बिचमा बाढीमा फसेकालाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिने भनिएपनि खराब मौसमका कारण सुर्खेतबाट हेलिकप्टर आउन नसक्दा उद्धारमा ढिलाई भईरहेको थियो । मौसममा सुधार आएसँ गै नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरले सकुशल उद्धार गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अशोक कुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
भीमदत्त नगरपालिका–९ मसेट्टीका ३५ वर्षीय पुष्कर नायक, ४५ वर्षीय दीर्घमती खड्का, ३२ वर्षीय शान्ती नायक, ९ वर्षीय असोक नायक र ५ वर्षीय अजय नायक सोमवार रातीबाट बाढीमा फसेका थिए । बाढीमा फसेकाहरु रुखमा बसेका थिए । उहाँहरुको उद्धारको लागि सुरक्षाकर्मीको टोली दिउँसो नै मसेट्टी पुगे पनि महाकालीमा पानीको बहाब बढी भएका कारण उद्धार गर्न सकेको थिएन । त्यस पछि हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्ने तयारी भएको थियो तर मौसम खराबीका कारण सुर्खेतबाट हेलिकप्टर उड्न सकेको थिएन ।
कर्णाली नदीमा आएको बाढीले टीकापुर नगरपालिका वडा नं ५ शाहीपुरस्थित निर्माणाधीन तटबन्ध भत्किएर नदी गाउँ पसेको छ । मङ्गलबार दिउँसो साढे १२ बजेतिर पसेको बाढीले क्षति पु-याउन सक्ने दक्षिणका गाउँका मानिसलाई माइकिङ गरेर घर छोड्न लगाइएको टीकापुर नगरपालिका वटा नं ५ का वडा सदस्य बलबीर चौधरीले जानकारी दिनुभयो । शाहीपुरका स्थानीय नारायण चौधरीले बोक्न सकिने कागजात र सामान लिएर घर छोडिरहेको र राष्ट्रिय माबि बसन्तामा बस्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
उता केहि दिनदेखि जारी अविरल वर्षाका कारण गएको पहिरोले घर पुरिँदा दूई बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । पहिरोले घर पुरिँदा धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १३ नागेश्वर मार्ग बस्ने निसान राईको ८ वर्षीया छोरी निसु राई र ४ वर्षीया छोरा निहान राईको मृत्यु भएको हो । आज (मंगलबार) दिउँसो १:४५ बजे राईको घरमाथिबाट पहिरो खसेको थियो । राईको टिनको छाना भएको एक तल्ले घर पुरिदा घरभित्र रहेका उहाँका एक छोरा र एक छोरीको मृत्यु भएको हो । घटनाको जानकारी पाए लगतै ईलाका प्रहरी कार्यालय धरानबाट उद्धारको लागी प्रहरी टोली खटि गएको थियो । उद्धारमा खटिएको प्रहरी टोलीले दिउसो साढे ३ बजे दुईजना बच्चालाई मृत अबस्थामा फेला पारेको हो । घटनाको बारेमा थप अनुसन्धान भईरहेको धरान प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
जुम्लामा भित्र्याउनै लागेको मार्सी धानको खेतमा बाढी आएपछि किसानलाई रुनु र हास्नु भएको छ । जुम्लाको तिला र हिमा नदी छेउ छाउमा पाकेर भित्र्याउनै लागेका मार्सीधााका खेतहरुमा बाढी पसेपछि ठूलो मात्रामा धान क्षति भएको किसानहरुले जनाएका छन् ।